Investment 1 agriculture myan by khin win myint - Issuu
ငင ခ ရင
မ ပ မဥပ ဒ င မနမ ငငသ မ (စကပ
မ ပ မ ဥပ ဒအရ လပငန ဆ ငရကရ တင စစစရမည အဓကအခ ကမ
ရ င သစအ ခခ စကမလပငန )
အဆင( အဆင(၁) အဆ ပ ခ ကစတင ခင
အဆ ပ လ( တင ပရန
အဆ ပ လ( ပစ (၁)အ DICA မရယ.ပ/ (သမဟတ) DICA
မရယ.ပ/။ ပစ 8က - ၅၀၀၀က ပ ကယပင မ ဖစပ / က လန-၃၉/ လယ-၃၀ ရရ 8က င အ ထ ကအထ /
လပငန ငစပလ & သညအခ ကမ
လA ကထ ဆB အ ထ ကအထ / မစ ရင ပစ (၁၀၅) တင ပရန၊ ပဂEလက မ ငအ ဆ ကအဦ င ရမ ဆ ငရက ခင ဖစလAင အင စ ခ ပ (မ.8ကမ ) ဌ နပင မအ ဆ ကအဦ ပHတင ဆ ငရကမညဆပ/က ရ နခ ပI သ ဘ ထ မတခ က ငအည ပငဆငထ
သ စ ခ ပ(မ.8ကမ ) ငအတ.
သကဆငရ ဝနLက ဌ နမ တစဆငတင ပရန စကပစ`ည /လပငန သ ပစ`ည မ
ပညတင မ ဝယယ.မည စ ရင ပညပ မဝယယ.မည စ ရင ကန8ကမ စ ရင ( ပညတင / ပညပ)
ရ ဆငရ တင ပခ ကမ
စစ& စကပ မ ရညမန ခ က စကပ မည အစအစ& အI /အ မတ စ ရင (ကန ဂဏန အခ ကအလကမ ၏ ငယစ ရင တင ပရန) ငသ စ ဆင မစ ရင ( Cash Flow Statement) ၊IRR၊ Pay Back Period တကခ ကမမ (ကန ဂဏန အခ ကအလကမ ၏ ငယစ ရင တင ပရန) ငင တ က ရရမည အက အ မတ အ ခအ န (ဝင ငခန/ကနသယလပငန ခန) အလပအကင ရရမအ ခအ န ( ပညတင / ပညပ ဝနထမ အငအ စ ရင ၊ လစ တကခ ကမ)
ရင င 8က အ ထ ကအထ
မ ပ မည ပညတင သ ငအတက ဝယယ.aပ တနဖ မအပ
ဘဏအ ထ က အထ တင ပရန၊ ရင မ ပ မတင ငင ခ ငပ/ဝငပ/က ငင ခ ဘဏ၏ Bank Statement တင ပရန၊
င ဆ ငရကခငရသည
အဆ ပ တင ပ ခင င အခနအ က က ကင လတခင လA ကလ( အ ထ ထ
ကတဝနခခ က ရင
မ ပ သ.၏ ငငသ စစစ ရ ကဒ မတbc
လပငန ဆ ငရကမည အစအစ& လပငန အသစ ဖစပ/က လပငန သဘ ဝ ရင လင ခ က မ ဘ Lက တင က ကယ ရ စမခ က လပငန ခငသ ယ ရ င ဝနထမ သကသ ခ ငခ ရ စမခ က အ ဆ ကအဦ ဆ ကလပaပ ဖစပ/က အ ဆ ကအဦ ဓ/တပ မတbc အ ဆ ကအဦ မ ဆ ကလပရ သ ပ/က အ ဆ ကအဦ ပစ ကမdဏဖB စည aပ ပ/က ကမdဏမတပတင လကမတ/ပစ (၆) (အစရယယ လB ပ င မ)/ ပစ (၂၆) (ဒ/Iကတ စ ရင ) သစအ ခခစကမလပငန
ဆ ငရကမည ဖစပ/က သစ တ စကခင
ထ. ထ ငမညအစအစ& ဌ နပင မက BOT စနစ ဖင င ရမ ဆ ငရက ခင ဖစပ/က ရ နခ ပI မ လပငန င သကဆငသည စ ခ ပမ
သ ဘ ထ မတခ က ငအည ပ စထ သည BOT စ ခ ပ (မ.8ကမ ) ဌ န ငဖကစပလပငန
ဆ ငရကပ/က လပငန သ ဘ တ. စ ခ ပ (မ.8ကမ )
အဆင( အဆင(၂) အဆ ပ ခ ကစစစ ရ အဖB (PAT) အစည အ ဝ သ တင ပ ခင
PAT အစည အ ဝ သ တင ပ ခင
အဆ ပ ခ က အနည ဆ (၂၀) စခန ပ ပရန ဖစပ/သည။
အဆင( အဆင(၃) သကဆငရ ဝနLက ဌ န မ သ သ ဘ ထ မတ ခ က တ င ခ ခင
သကဆငရ ဝနLက ဌ နမ သ သ ဘ ထ မတ ခ က တ င ခ ခင
တ င ခထ သည အဆ ပ ခ က (၂၀) စအနကမ လအပသ လ ကက အသ ပ မည ဖစပ/သည။
အဆင( အဆင(၄) လအပခ ကမ ပငဆင တင ပ ခင
ပငဆငတင ပ ခင
အဆ ပ ခ က စစ ဆ ရ အဖB ဝငမ ဆ
င သကဆငရ ဝနLက ဌ နမ ၏
ခ က င သ ဘ ထ မတခ ကမ အတင လအပခ ကမ က
ပငဆင ဖညစကရန ဖစပ/သည။
အဆင( အဆင(၅) က မရငအစည အ ဝ သ တင ပ ခင
က မရငအစည အ ဝ သတင ပ ခင
အဆ ပ ခ က (၁၀) စမ (၁၂) စခန၊ အစည အ ဝ ၌ ရင လင တင ပရန Power Point ၊ အဆ ပ ခ ကအ PDF ဖင ပ င လBတင ပရန၊
အဆင( အဆင(၆) ခင ပ မနထတယ. ခင
ခင ပ မနထတယ. ခင
ဒ/Iကတ အဖB ဝင (၁) ဦ မ လ ရ ကထတယ.ရန၊ ၄င ပဂE လ၏ မတပတင (သ) Passport (မ.ရင ၊ မတbc) ဒ/Iကတ စ ရင ငင ခ ကမdဏမ သည ဘဏတင US$ ၇၅,၀၀၀ သင ထ သည အ ထ က အထ ဌ နဆငရ မ သ ဖန ဝရန ပညစ သ အဆ ပ လ( (၇) စ သဘ ဝ ပတဝန က င ထခကမမရ စရန ဆ ငရကထ ရမ အစအစ&
Investment 1 agriculture myan